Iimbono ezibalaseleyo, ubunewunewu, obulungele izibini
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguScott G And Jill K
• Umgangatho obalaseleyo wendlu yodidi oluphezulu
• Iimbono zePanoramic kuyo yonke i-Edinburgh
• Indawo yokuhlala ezimeleyo ngokupheleleyo
• Indawo yokupaka esitratweni yasimahla
YIMA UKUCINEZA! -ULeith ubekwe kwindawo yesi-4 kumanqanaba angama-50 ehlabathi apholileyo ngo-2021
I-Leith yase-Edinburgh itsibe iindawo ezingama-20 kule minyaka mithathu ukusukela oko imagazini yezokhenketho yehlabathi i-Time Out yayibeka kwindawo yama-24 eyona ndawo ipholileyo kwihlabathi ngo-2018.
Indlu ibekwe kumgangatho we-8 (phezulu) wesakhiwo esitsha esikufuphi naManzi aseLeith. Le ndlu inemeko yangoku, yobunewunewu kunye neengwevu ezicinyiweyo kunye nepinki. Owona mba unomtsalane weflethi kukufutshane kwe-360 yeembono zesixeko.
Le ndawo inesitayile se-boutique ilungele izibini kwaye ibonelela ngoyilo lwesicwangciso esivulekileyo esibandakanya indawo yokulala eyahlukileyo enegumbi lokuhlambela le-en-suite, indawo yekhitshi kunye negumbi lokuhlala. Kukho ibhedi elingana nenkosi kunye ne-deluxe pocket-sprung umatrasi ukuze ulale kamnandi ebusuku; igumbi lokuhlambela langoku elicocekileyo nelingenachaphaza elinomzila wetawuli oshushu, ifeni yodonga kunye netyhubhile enkulu yokuhamba ngeshawari; ikhitshi elifakwe ngokupheleleyo elineoveni yemicrowave edityanisiweyo kunye nesitovu sokungenisa izinto, ifriji enebhokisi yesikhenkcezisi, umatshini wokuhlamba kunye negumbi lokuhlala elitofotofo elinesofa enkulu, itafile yokutyela kunye ne-43 "Smart TV (iitshaneli zokujonga simahla, ukufikelela kwiakhawunti yakho yeNetflix kunye ne-YouTube, njl.njl).Kukwakho ne-WIFI enyulu enesantya esiphezulu kuyo yonke indawo. Indawo igqunywe ngokupheleleyo kwaye inobushushu obusebenzayo kwezo mini nobusuku zaseSkotlani zibandayo!
Eyona nto eyenza eli flethi likhethekileyo ziimbono zalo ezimangalisayo. Ngokwenene ngamava awodwa okukwazi ukubona isixeko siphela (kunye nezixhobo zomlilo ezidumileyo) ukusuka kuthuthuzelelo lwesofa yakho. Indawo yokuhlala ikwasisiseko esifanelekileyo sokuhlola zonke iindawo ezihlukeneyo zase-Edinburgh njengoko uninzi lukumgama wokuhamba ngoko ke kuhlala kungafuneki iteksi okanye indawo yokupaka ebiza imali eninzi. Sikwisitrato esithe cwaka kwindawo yezibuko yakudala yaseLeith enembali kwaye ngoku ilikhaya kwezona ndawo zokutyela zininzi zase-Edinburgh kunye nemivalo. Le ndawo ilungile njengoko uninzi lweyona ndawo inomtsalane ye-Edinburgh ikumgama ohamba lula (iPrincess St yimizuzu nje engama-25 uhamba). Ukuba ukuhamba ayisiyonto yakho sinokhetho olubalaseleyo lweebhasi ekupheleni kwendlela ezibonelela ngeyona ndlela ibalaseleyo, rhoqo kwaye engabizi kakhulu yokuhamba. Ukuhlala nje kancinci esixekweni kuthetha lula (kwaye rhoqo simahla) indawo yokupaka ukuba unemoto kunye nengxolo encinci kakhulu yasebusuku ukuze ikukhathaze.
4.94 out of 5 stars from 333 reviews
4.94 · Izimvo eziyi-333
Le ndlu ibekwe kwindawo eyahluka-hlukeneyo kunye ne-eclectic yaseLeith Shore. Le ndawo izele ziivenkile zokutyela, ii-pubs, iikhefi kunye neevenkile ezisuka kwiindawo ezishibhile nezichwayitisayo ukuya eMichelin ezineenkwenkwezi eziqhutywa ngabapheki abadumileyo abafana noTom Kitchin kunye noMartin Wishart. Ubumelwane yingqokelela yezinto ezindala nezintsha kwaye likhaya lezizwe ezininzi ezahlukeneyo kunye nabahlali (abaziwa ngokuba ziiLeithers). Ummandla wezibuko laseLeith unembali etyebileyo- kutheni ungabinayo ikofu emnandi kunye nekeyiki emnandi kwi-Mimi's Artisan Bakery ngoku ehleli kwidokhi apho uMary Queen waseScots wayedla ngokwehla kuhambo lwakhe. Okanye kwimbali yanamhlanje, ndwendwela iRoyal Yacht Britannia ehleli nje imizuzu emi-5 uhambe kwindawo yokuthenga edumileyo yaseOcean Terminal. Kukho i-24hr enkulu ye-ASDA ivenkile enkulu ye-ASDA nje imizuzu eli-15 ukuhamba kuyo nayiphi na 'embindini wobusuku' iimfuno! ITesco Express kunye neSainbury Local zikufutshane kunye nevenkile enkulu ebizwa ngokuba 'Nantoni na nayo yonke into' ethengisa kanye loo nto! Le ndawo ineevenkile ezininzi ezilungileyo ezinikezela ngesiqhelo saseTshayina, samaIndiya, ukhetho lweChippy kunye neGrike, i-Afro-Caribbean eateries. Zininzi iivenkile ezikhethekileyo ezifana neevenkile ezinkulu zasePoland, zeMeditera kunye neTshayina. Kulabo abanokutya okukhethekileyo kukho i-Tesco Supermarket egqwesileyo ezantsi kwe-Leith walk (imizuzu eyi-10 uhamba) enecandelo elikhulu SAMAHHALA UKUSUKA kunye neemveliso ezininzi zamazwe ngamazwe.
Umbuki zindwendwe ngu- Scott G And Jill K
UJill uhlala kwisakhiwo esifanayo kwaye uya kuba khona ukujongana nazo naziphi na iingxaki ezinzulu. Unxibelelwano lwakho lokuqala lufanele lube nge-app ka-Airbnb/iwebhusayithi. Sifumaneka 24/7 ukujongana nayo nayiphi na imiba.
UScott G And Jill K yi-Superhost